တစ်ခါတစ်လေတော့လဲ သတိရပါတယ်… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » တစ်ခါတစ်လေတော့လဲ သတိရပါတယ်…
Posted by Ma Ei on Feb 17, 2015 in Creative Writing | 22 comments
ဦးလေး စီးကရက်တွေ သောက်နေပြန်ပြီလား၊ မသောက်တော့ဘူးဆို…
ရုံးက pantry ထဲ ထမင်းစားဘို့ ၀င်လာတဲ့ ကျမ စီးကရက်နံ့ထောင်းထောင်းထအောင် သောက်နေတဲ့ ဦးလေးကိုတွေ့လိုက်ရတာမို့ မနေနိုင်ပြောလိုက်မိပြန်ပါပြီ။
ဦးလေးကလဲ ထုံးစံအတိုင်း… အေးပါဟာ ခုလေးမှပါ ခဏဘဲရှိပါသေးတယ်… အငွေ့တွေ ရှိုက်မသွင်းပါဘူး ခဏငုံထားပြီးထုတ်လိုက်တာပါ… အာသာပြေပေါ့ .. ပြီးရင် နင်ဘာဟင်းချက်လဲ ငါတော့ ၀က်ကလီစာ ချက်လာတာ.. အမနေကောင်းလား ကို…ကော နေကောင်းလား စသည်ဖြင့် စကားလွှဲတွေ ဒလစပ်ပြောရင်း စီးကရက် ကိုကုန်အောင် ဖွာပါတော့တယ်။
ဦးလေးဆိုတာ ကျမတို့ ငယ်ငယ်တုံးက ဘေးအိမ်က သူ့အမအိမ်ကိုလာရင်း ကျမတို့ ရဲ့ ဦးလေးလိုခင်ခဲ့ရသူ ကျမအိမ်ထောင်ကျတော့လဲ အမျိုးသားနဲ့က သူငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့ဖူးသူပါ.. ခုတော့ ကျမ အလုပ်လုပ်တဲ့ Company group က လူကြီးလေ… စီးကရက်ကိုတော့ လက်ကမချ လက်ကြားဝါအောင် ကိုယ်မှာအနံ့စွဲနေတဲ့ထိ သောက်တတ်တာကလွဲလို့ ပျော်ပျော်နေတတ်ပြီး ၀န်ထမ်းတွေဘက်က နေတတ်သူမို့ အားလုံးက ချစ်ခင်လေးစားကြသူပါ။
စီးကရက် အနံ့ပါးပါးလောက်ကို နှစ်သက်တတ်သူကျမ၊ မိုးအေးအေးမှာ စီးကရက်တစ်လိပ် သီချင်းတွေနဲ့ငြိမ့်ခဲ့ဘူးသူကျမ ခရီးသွားရင် တစ်ခါတစ်လေ စီးကရက်လေးနဲ့ အဖော်ပြုခဲ့ဘူးပေမယ့် ဦးလေးကိုတော့ လက်မြှောက်ခဲ့ရပါပေါ့။
နောက်တော့ Company ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း အဆင့်ဆင့် နေရာရွှေ့ တာဝန်ပေးတာမို့ ဦးလေးနဲ့ ကျမ ရုံးနေရာ မတူတော့ပါဘူး။ အဆောက်ဦးတစ်ခုတည်း အတွင်းမှာကိုဘဲ တာဝန် အသီးသီးနဲ့ဆိုတော့ အကြောင်းကိစ္စရှိမှသာ ဦးလေးကိုတွေ့ဖြစ်တာမို့ နိုင်ငံခြားကို ဆေးသွားကုတယ်ဆိုမှဘဲ နေမကောင်းတာ သိရပါတော့တယ်။ သူ့တပည့်မလေးပြောမှ.. ..ခံတွင်းကင်ဆာ ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်း သွားဖုံးမှာ အဖုပေါက်လို့ သွားဆေးခန်းမှာခွဲကြောင်း၊ စစ်ဆေးချက်အဖြေအရ ကင်ဆာအမည်တပ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံခြားက ဆရာဝန်ကြီးတွေနဲ့ ပြပြီးမှ ဆဲလ်များ ပျံ့နှံ့မှုမြန်နေတဲ့အတွက် မျက်နှာတစ်ခြမ်းက အရိုးများလှီးထုတ်ရမှာဖြစ်ကြောင်း သိခွင့်ရပါတော့တယ်။
ဦးလေးပြန်ရောက်ပြီတဲ့၊… international ဆေးရုံကြီးတစ်ခုမှာ ကျမတို့သွားတွေ့တဲ့အခါ အရိုးတစ်ခြမ်းမရှိလို့ တစ်ဖက်ချိုင့်နေတဲ့ မျက်နှာ၊ ပိတ်မရတဲ့ မျက်လုံးတစ်ဖက်၊ သွားတွေတစ်ချောင်းမှမရှိဘဲ စေ့မရတဲ့ နှတ်ခမ်းတစ်ဝက်၊ မပီသ တိုးလျှတဲ့ စကားသ၊ံ ပြန်တော့လို့ ပြနေတဲ့ လက်အမူရာတွေကြောင့် စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ဘဲ အခန်းပြင်ထွက်လို့ ငိုမိပါတော့တယ်။
နောက်တော့ ဆေးရုံကဆင်း ဓာတ်ကင် ဆေးသွင်း စတာတွေလုပ်ရင်း နေကောင်းလာလို့ ရုံးပြန်တက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ငါးနှစ်တော့ ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့.. အံကပ်နဲ့ ခုတပ်ထားတဲ့ မျက်နှာအနေထားကတော့ တွေ့စကလောက်မဆိုးတော့ပေမယ့် အရင်လိုအကောင်းတော့ မဟုတ်တော့ပါဘူး၊ အသားရောင်ကလဲ မမှန် တစ်ခါတစ်လေ မဲခြောက်နေတတ်ပါတယ်။ ဦးလေးနေပြန်ကောင်းရင် စီးကရက်တွေ မသောက်နဲ့တော့နော် လို့ ကျမ ပြောဖြစ်အောင်ပြောတဲ့အခါ ဦးလေး ရယ်နေပါတယ်။ စီးကရက်ရဲ့ မကောင်းကျိုးတွေလဲ မိချောင်းမင်း ရေခင်းပြမိပါတယ်…
စီးကရက်မှာ ပါဝင်တဲ့ ဆေးရွက်ကြီးတွင် အဓိကအားဖြင့် နီကိုဒင်းနှင့် နိုက်ထရိတ်၊ ပရိုတင်းနှင့် အယ်လကာလွိုက်များမှ ပြောင်းလဲလာသည့် ကင်ဆာဖြစ်စေသော ဓာတုပစ္စည်းများပါဝင်ကြောင်း၊ ဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်းမှာ အဓိကအားဖြင့် နှစ်မျိုးရှိပြီး အငွေ့ထွက်သော ဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်းနှင့် အငွေ့မထွက်သော ဆေးရွက်ကြီးထွက် ပစ္စည်းတို့ဖြစ်ကြောင်း၊ အငွေ့ထွက်သော ဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်းတွင် စီးကရက်၊ ဆေးပေါ့လိပ်၊ ဆေးပြင်းလိပ်၊ ပြောင်းဖူးဖက်လိပ်နှင့် ဆေးတံ စသည်တို့ နှင့် အငွေ့မထွက်သော ဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်းတွင် ကွမ်းစားဆေးအမျိုးမျိုးပါဝင် တဲ့ အကြောင်း ၊တွေ ပြောပြလို့ပေါ့… ပြီးတော့
ဆေးလိပ်နှင့် ဆေးရွက်ကြီး အသုံးပြုမှုတို့ကြောင့် နှစ်စဉ်လူပေါင်း သုံးသန်းခန့် အသက်ဆုံးရှုံးကြရပြီး ဆေးလိပ်နှင့် ဆေးရွက်ကြီး သုံးစွဲခြင်းနှင့် နှီးနွှယ်သော ရောဂါများကြောင့် သေဆုံးရသူဦးရေမှာ ၄ ဒသမ ၉ သန်းကျော် ရှိနေပြီး တစ်ဆင့်ခံ ဆေးလိပ်ငွေ့ရှူရှိုက်ရမှုကြောင့် သေဆုံးသူဦးရေမှာ ခြောက်သိန်း ကျော်ရှိနေတဲ့ အကြောင်း ဖတ်ဖူးသမျှလေးလဲပြောပြဖြစ်ပါတယ်။
ခြောက်လလောက်အကြာမှာ ဦးလေးရောဂါပြန်ဖြစ်ပါတယ်၊ နိုင်ငံခြားမှာ ပြန်စစ်တော့ ကျန်တဲ့ မျက်နှာတစ်ဖက်ခြမ်းက အရိုးကိုကူးသွားပါပြီတဲ့ ပျံ့နှံ့မှုနှုန်းကလဲ မြန်လွန်းပါသတဲ့ နိုင်ငံခြားမှာ ခွဲစိတ်ကုသမှု မလုပ်တော့ဘဲနဲ့ ဒီမှာဘဲ ဓာတ်ကင် ဆေးသွင်းပြီး သက်သာအောင်နေရပါတော့မယ်တဲ့။ ဆေးရုံ ဆေးခန်းမှာ တစ်လှည့်စီ ဆေးသွင်းရင်း အခြေနေ ပိုဆိုးလာခဲ့ပါပြီ။ မျက်နှာတစ်ဖက်မှာ အဖုထွက်ပြီး ယောင်လာတဲ့အတွက် တစ်ဖက်ကချိုင့်နေတာ ပိုသိသာနေခဲ့တယ်၊ နှာခေါင်းကနေ ပြည်ပုတ်ရည်တွေ စီးကျလာခဲ့လို့ အနံ့အသက်လဲ မကောင်းခဲ့ဘူး၊ အဖတ်မျိုမရလို့ ဆေးနဲ့ အစာမှန်သမျှ ကြိတ်ချေပြီး ပိုက်နဲ့ထည့်ရတယ်။
နောက်တော့ ဆေးရုံပြန်တင်ရတော့တယ်။ ကျမ အမျိုးသားက ဆေးရုံမှာဦးလေးကို သွားတွေ့တဲ့အခါ သူငိုပါတယ်၊ ဓာတ်ကင်ပြီးရင် သူ့မှာမျက်နှာကို မီးရှို့နေသလိုခံစားရတာတဲ့.. မင်းတို့ အားပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပေမယ့် ပြန်ကောင်းလာမယ်လို့ သူ့မှာ မျှော်လင့်ချက်မရှိတော့ပါဘူးလို့ မျက်ရည်တွေနဲ့ ပြောလာခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီညမှာဘဲ မျက်နှာပေါ်က အဖု ပေါက်ထွက်သွားပြီး မနက်ပိုင်းလောက်မှာ အသက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။
အစားမတော် တစ်လုပ် အသွားမတော်တစ်လှမ်းတဲ့ ဦးလေးအတွက်တော့ ဘယ်လို စကားပုံပြောရမလဲ၊၊ ဦးလေးသာ စီးကရက်မသောက်ရင် ဒီလိုဝေဒနာ ခံစားရမှာမဟုတ်ပါဘူး လို့တွေးမိပါတယ်။ စီးကရက် မသောက်တတ်သူတွေလဲ ဒီရောဂါ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမယ့် စီးကရက်သောက်တဲ့သူတွေကတော့ ဖြစ်နိုင်ချေများတယ်မို့လား။ သိန်းပေါင်း ထောင်ချီကုန်ခဲ့ပေမယ့် ဦးလေးအသက်ကို မကယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ၀ဋ်ကျွှတ်သွားတယ်လို့သာ ဖြေရမယ်ပေါ့။ဘ၀ ဘ၀ တွေက ၀ဋ်ကျွေးပါလို့ ဒီဘ၀ပေးဆပ်ရခြင်းဆိုရင်ဖြင့် နောင်ဘ၀တွေ ဒီအဖြစ်မျိုးဝေးပါစေ ဦးလေးရေ…
ဒီနောက်ပိုင်း ကျမ ခင်တဲ့သူ ပြောခွင့်ရတဲ့သူ အားလုံးကို စီးကရက်မသောက်ဖို့ ပြောပါတယ်။ ဦးလေးကတော့ ဒီလမ်းကိုရွေးချယ်သွားပါတယ်။ နောက်လူတွေ ဒီလမ်းကို ဆက်မလျှောက်စေချင်ပါ။
ဆေးလိပ် သို့မဟုတ်စီးကရက် အငွေ့ထဲတွင်ကတ္တရာစေး၊ နီကိုတင်း၊ ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်၊ ဟိုက်ဒြိုဂျင်ဆိုက်ရာနိုက်၊ နိုက်ဒြိုဂျင်အောက်ဆိုဒ်ဓာတ်များပါဝင်ပြီး ရှူရှိုက်သွင်းလိုက်သည့်အခါ အဆုတ်မှတဆင့် သွေးထဲသို့ရောက်ရှိသွားပြိး ခန္ဓာကိုယ်တခုလုံးကိုပျံ့နှံ့သွားကာ အဆုတ်သာမက အခြားအင်္ဂါများကိုပါ ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
ဆေးလိပ်၊ ဆေးရွက်ကြီး သုံးစွဲသူများသည် အဆုတ်ပွခြင်း၊ နာတာရှည်လေပြွန် ရောင်ရမ်းခြင်း၊ အဆုတ်ကင်ဆာ၊ ခံတွင်း ကင်ဆာ၊ အသံအိုးကင်ဆာတို့အပြင် အစာမျိုပြွန်၊ ဆီးအိမ်၊ ကျောက်ကပ်၊ အသည်း၊ အစာအိမ်၊ အူမကြီးကင်ဆာများ ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများကိုယ်တိုင် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း(သို့) ဆေးလိပ်ငွေ့ရှူရှိုက်မိခြင်းတို့ကြောင့် သားအိမ်မှတစ်ဆင့် သန္ဓေသားသို့သွားသည့် သွေးကြောကျဉ်းခြင်း၊ သွေးခဲခြင်းတို့ကြောင့် မိခင်နှင့်ကလေးပါ အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ သားပျက်၊ သားလျှောခြင်း၊ လမစေ့ဘဲ ကလေးမွေးဖွားခြင်း၊ ပေါင်ချိန်မပြည့်သော ကလေးမွေးဖွားခြင်း၊ မွေးရာပါ ကိုယ်အင်္ဂါ ချို့ယွင်းခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
ကောင်းကျိုးမရှိတဲ့ စီးကရက်ကို ကိုယ်တိုင် သောက်ကြသူတွေအပြင် တစ်ဆင့်ခံ ရှူရှိုက်နေကြရတဲ့ မိမိရဲ့ ချစ်ခင်သူတွေ ကိုပါ အန္တရာယ်မဖြစ်စေဘို့ ဖြတ်လိုက်စေချင်ပါတယ်။ တတ်နိုင်ကြတဲ့ ချစ်ခင်သူတွေကလဲ မသောက်ဘို့ ပြောပေးကြပါ၊ လျှော့သောက်ရာမှ ဖြတ်လိုက်ကြစေချင်ပါတယ်။
စီးကရက်ဖြတ်ဘို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းက သစ်ကြပိုးခေါက်ကို စီးကရက်ကဲ့သို့ အားပါးတရဖွာလိုက်ပါ… ခဏနေရေသောက်ပါ… အာသာပြေသွားပါလိမ့်မယ်…
တစ်ခါတစ်လေ တော့လဲ စီးကရက်ကို ဟန်ပါပါခဲနေကြတဲ့ လူကြီး လူရွယ် တွေကိုမြင်တိုင်း ကျမ ဦးလေးကို သတိရပါတယ်။
စီးကရက်က ပေးတဲ့ ဝေဒနာဆိုးမှ ကင်းဝေးကြပါစေ။
ဆေးပညာပေးပိုစ့်လေးအတွက် ကျေးဖူးပါ မအိရေ။
တကယ်တော့ သိပင်သိသော်ငြား အသိသည် သတိကို မလွှမ်းမိုးနိုင်သေးလို့ပါ။
အသိ နဲ့ သတိ ထပ်တူကျသောနေ့ ဖြတ်နိုင်ကြမယ်ထင်ပါ၏………. ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကို။
ပထမဆုံး Comment အတွက် ကျေးဇူးပါ ကိုခ၊
တွေ့ဆုံပွဲ အလှူ နေ့က ခန်းမအပြင်ထွက် စီးကရက်သောက်နေကြတဲ့ ရွာသားတွေကြောင့်
ဦးလေးကိုသတိရတဲ့ အပြင် ကျန်းမာရေးထိခိုက်ကြမှာ စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ ရေးမိတဲ့ ပိုစ့်လေးပါ…
.မအိရေ ကျမ ပြောမယ်နော်။ ကျမ စီးကရက်အနံ့တော်တော်ကြိုက် တယ်။ သူများသောက်ရင် ဘေးကနေ အနံ့လိုက်ခံတာ။ ဘယ်လိုမှ မရှောင်နိုင်အောင်ကို ကြိုက်တာ။ အဲဒါ ဘယ်လို လုပ်ရမတုန်း။
.ဟင်…မအိတစ်ယောက်ပဲ ထင်တာ….မပြုံးရောပဲ စီးကရက် အနံ့ကြိုက်တာလား…
.ဒါဆို ကောင်းကင်ပြာက တော်သေးတယ်ပြောရမယ်…
.ကောင်းကင်ပြာက လက်သည်းဖျက်ဆေး တင်ဒါအနံ့ကို အရမ်းကြိုက်တယ်…. (အဲ့ဒါကများ ပိုဆိုးမလားမသိဖူး….)
ကလေးတွေ ကော်ရှူသလိုမျိုး အသဲခြောက်တတ်တယ်လို့ သိရပါတယ်…
တူမလေးတစ်ယောက်ကတော့ သားရေနံ့ ဓာတ်ဆီနံ့ ကြိုက်သတဲ့…
ကျမလဲ စီးကရက်နံ့လေး ကြိုက်ခဲ့ဘူးသလို
.ခုတော့ အနားမှာသောက်နေလို့ အနံ့ရရင်
.အားမနာတမ်း ချက်ခြင်းဘဲ နှာခေါင်းပိတ်လိုက်မိပြီ…
ကျနော်ကတော့ စီးကရက်ကို မကြိုက်တတ်ဘူး
တစ်ခါတလေတော့ ဆေးပေါ့လိပ်ကို ထိုင်ခဲနေတတ်တယ်။
ရွာက ပြောင်းဖူးထက်ဆေးပေါ့လိပ်ကြီးဆို အတော်သဘောကျမိတာ
ဒါမယ့် ကိုယ့်ဘေးမှာ လာ ထိုင်သောက်နေတဲ့ စီးကရက်သမားတွေရဲ့ မီးခိုးကိုတော့ သည်းမခံတတ်ဘူးးး
ဒီပို့စ်လေးက ဗဟုသုတရော ရသပါ ပါနေလိုက်တာ
ဆေးပေါ့လိပ်လဲ အနည်းနဲ့ အများတော့ ကျန်းမာရေးထိမယ်ထင်…
မီးပွားကျရင် အ၀တ်စားလည်း ပျက်စီးဦးမှာ…
ဒီရောဂါကြီးက ခံရခက်လိုက်မဲ့ ဖြစ်ခြင်း
ရသာတဏှာ တခုနဲ့ ခံစားရတာ မတန်လိုက်တာ
ဦးလေး ဆို မမြင်ရက်အောင် ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်နဲ့
ဟမ်… အခုတင် ဇနီးသည် မရွှေဗိုက်စ် အနံ့ရှူမိမှာစိုးလို့ အပြင်ထွက်ပြီး ဆေးလိပ်သောက်လာတာ…
မကောင်းမှန်းတော့သိပေမည့် Stress ရတဲ့အချိန် ၊ အကြံအိုက်နေတဲ့အချိန်… ဂလုတဲ့အချိန်…
Nicotine Refreshment လုပ်မိပါတယ် … ကင်ဆာဆိုတာကို သိသိကြီးနဲ့ပါ…
ကျောက်စ် အဖိုးရော အဖွားရော ဆေးလိပ်သောက်ပေမည့် လူကြီးရောဂါနဲ့ပဲ ဆုံးပါတယ်…
အဖွားက ရှမ်းပြည်ကလာတဲ့ သနပ်ဖက်စစ်စစ်ကို ကိုယ်တိုင်ဖြတ်တဲ့ ဆေးရိုးစစ်စစ်နဲ့ …
ပြောင်းဖူးဖက် အစီခံကအစ ကိုယ်တိုင် စီမံပြီးသောက်တာပါ …
အပြင် စီးကရက်တော့ မသောက်ဘူး… သူတို့ခေတ်နဲ့ ကွာလေစွ
ကျောက်စ်လည်း မကြာမတင် သားလေးမွေးလာရင်တော့ ဖြတ်ဖြစ်မှာပါ…
စကားစပ်လို့ပြောရရင်… ကျောက်စ် ကင်ဆာဖြစ်ရင် မကုဘူး… အသေခံမယ်…
ကုလည်းပျောက်မှာမဟုတ်… ကျန်ခဲ့တဲ့မိသားစု မွဲတာပဲ အဖတ်တင်မှာ…
ဒီတပါတ်ရတဲ့ တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းအဖုံးသတင်းဆောင်းပါးအရတော့.. ဒီခေတ်ကလေးတွေ အသက်၁၄၂နှစ်ရှည်မတဲ့ဗျ..။
အဲဒီဇယားထဲ.. ၂၀၁၅မှာ ကင်ဆာကြောင့်သေနှုန်းကျမယ်လို့..တွက်ထားတယ်..။ ကြည့်ရတာကင်ဆာပျောက်ဆေးတောင်ပေါ်နေသလားပဲ..။ ၀င်းကျင်အသိတွေထဲ.. အနည်းဆုံး ၃ယောက်က ကင်ဆာဖြစ်ပြီး စပ်သပ်ဆေးအတွက်အစမ်းသပ်ခံအဖြစ်မှတ်ပုံတင်အကုခံနေတာ.. ၅နှစ်မကတော့..။ မသေတဲ့အပြင် ဆံပင်တွေတောင်ပြန်ပေါက်လာ..။
ကင်ဆာဖြစ်ရင်.. သေမင်းကို.. ခဏာလေးလောက်စောင့်ခိုင်းလိုက်နော..။
ပူမနေ နဲ့။ ကင်ဆာပြီး ရင် နောက် အသစ်တစ်မျိုး ထပ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။
လူတွေ ပျင်းနေမစိုးလို့ သဘာဝကြီး က ဖန်တီးပေးနေတာ။
နှင်းကလေး မမွေးခင် ကြိုတင်ဖြတ်လေ ကျောက်စ်ရဲ့
ကိုယ်ဝင်းကြည်နဲ့ စီးကရက်အငွေ့ရှု နေရမစိုးလို့…
…ကင်ဆာဆိုတာကြီး ဖြစ်ခဲ့ရင် သေမှာတူတူ ခံစားရတာကြာအောင် မလုပ်ပါနဲ့
ဘာဆေးမှမသောက်ပဲ မြန်မြန်သွားချင်တာမို့ ကုမပေးပါနဲ..
ရှင့် ဖြစ်ရင်လည်း မကုဘူး.. ကြိုပြောထားတာ…လို့ ပြောမိတယ်…
ကိုယ်ချစ်ခင်ရတဲ့သူတစ်ယောက် ခံစားနေတာကို ကြည့်ရတဲ့သူလည်း မသက်သာလှပါဘူး။
ကိုယ့်ဆီက ကလေးတွေကိုတော့ အရက် စီးကရက် ကွမ်း ဆိုတာ မွေးကတည်းက သုံးစွဲတတ်တာမဟုတ်ဘူး။
အကျင့်လုပ်ပြီး သုံးရင်းကနေ ဖြတ်မရတော့တာမို့ …
တကယ်တော့ အန္တရာယ် အစ ကို မစမ်းတာဟာ အကောင်းဆုံးပါဘဲ။
စွဲ မိရင် မပြတ်တာ ကိုယ်တွေ့ဘဲ။
ရွာထဲ ည ဖက် စာဝင်မဖတ်သင့်ဘူး။
ဖတ်မိရင် ဒီအတိုင်း ပြန်ထွက် လို့ မရ မှန်း သိလဲ မပြတ်နိုင်ဘူး မအိ ရဲ့။
အရလွယ် နေတော့ ပို ခက်တယ်။
တကယ်လို့ မရတဲ့ အချိန် သူ့ဟာသူတော့လဲ ဖြစ်တာပါဘဲ။
ဆေးလိပ်ကတော့ မပြတ်တောင် လျှော့သောက်ကြပါကွယ်တို့။
အဓိက သားရှင် ပါပါး များ။
ကလေး တွေ လိုက်သောက်နိုင်တယ် ဆိုတာလေး သတိပြု ကြစမ်းပါ။
အိမ်ပြင်ထွက်သောက်လည်း.. အဲဒီအနံ့က.. ပါတ်ဝန်းကျင် ပေ၅၀လောက်အထိရောက်တာပဲ..။ ကလေးတွေထိခိုက်ပါတယ်..။
အဲဒါကြောင့် အသက်အာမခံ..ကျမ်းမာရေးအာမခံတွေမှာ.. ဆေးလိပ်သောက်တယ်ဆိုတာနဲ့..ပရီမီယံဈေးကတက်ပြီးသားပဲ..။
အာမခံဌာနတွေကလည်း.. အရက်သောက်တတ်သလား.. မေးခွန်းထဲထည့်ကိုမမေး…။ အလွန်အကျွံသောက်ရင်တော့ အသဲရောဂါနဲ့သွားမပေါ့..။
Protect Your Loved Ones From Secondhand Smoke …
Secondhand smoke is the combination of smoke that comes fromacigarette and smoke … Secondhand smoke is especially dangerous for children, babies, and ..
.မအိ ပို့စ်ဖတ်ပြီး တော်တော်လန့်သွားသဗျ
တန်ဖိုးရှိတဲ့ပိုစ့်ကလေးမို့ ကျေးဇူးတင်မိတယ် မွအိရေ။
မသောက်ပါဘူးဆိုမှ ဒီတခါ ရွာပွဲလာရင်း ၁၉လမ်းရောက်ဖြစ်တော့ ဝိုင်းတွေလှည့်ပြီး promotion ဆင်းတဲ့ မချောက “မသောက်ဘူးဆိုလည်း စမ်းသောက်ကြည့်ပါ နည်းနည်းချင်းစီ စ သောက်ပေါ့” ဆိုပြီး ပြန်ပြောနေလို့ ဒေါသ အလိပ်လိုက် ထွက်ခဲ့ရသေး……….
ဆေးလိပ် အရက် ကွမ်း ဘာမှမစွဲတာကောင်းတယ်။
ဖေဖေကော ချစ်ချစ်ကော ကွမ်းစွဲနေပြီမို့ ပြောရတာလည်း အာတွေပေါက်တော့မယ်။
စီးကရက် အနံ့ကြိုက်တဲ့ထဲ ကျနော်လည်းပါတယ်။
ကျနော့ အဖေနဲ့ မောင်လေးပဲ မသောက်တာ။
ဆေးလိပ် ဆိုးကျိုးတွေပါတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်နဲ့ တရားပြဖူးသော်လည်း ဘယ်သူ့ကိုမှမအောင်မြင်လို့
တစ်ယောက်တည်း လွတ်ပြီးရော ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ပဲ အဲဒီ မီးခိုးနဲ့ အနံ့ကို ရှောင်နေလိုက်တယ်။
မအိ ရဲ့ ရသ ရေးလက်လည်း ကောင်းတယ်ဗျ။